Chikafu chePerricone chekudzora huremu senge CHINOKOSHA | Kudya kweNutri
La Kudya kwePerricone ndeimwe yenzira dzakakurumbira dzekuderedza uremu nzira kunze uko nhasi uye ine chikwereti zita rayo kune a mukurumbira dermatologist uye nyanzvi yekudya zvinovaka muviri yezita rimwe chete. Kudya kwekudya, kuwedzera kune kuvimbisa kurasikirwa kwakanyanya kwekurema munguva ipfupi, kunovimbisa kuti inobatsira kugadzirisa mamiriro epfungwa uye kuwedzera simba remagetsi mumunhu ari kutaurwa. Icho chikafu chinonyanya kuzivikanwa nhasi kubvira vazhinji vane mukurumbira vakamutevera kudzora huremu uye uwane huwandu hutete.
Kudya uku kunoedza kutevera mhando yechikafu ne mishonga yakawanda sezvinobvira uye nzvenga nzira yekutsvedza yezvinonzi kudya kwezvishamiso nguva dzese. Zvisinei zviri chikafu chakatsoropodzwa uye chakaora moyo nenhamba huru yevanamazvikokota uye nyanzvi dzekudya zvinovaka muviri vanozviona seimwezve chishamiso chikafu chine njodzi yekudzokazve.
1 Chii chinonzi kudya kwePerricone?
2 Iwo mapoka gumi ezvikafu zvePerricone chikafu
3 Perricone kudya kwemazuva ese menyu
4 Kukanganisa kwekudya kwePerricone
Chii chinonzi kudya kwePerricone?
Dr. Perricone anonongedza kuti varipo mapoka ezvokudya gumi nemhando dzakasiyana dzezvikafu izvo zvisingafanirwe kushomeka mukudya kwemazuva ese kwemunhu chero anoda kurasikirwa neakawandisa makirosi. Kuti udzivise kuwana huremu nemakirogiramu, chikafu chinopa zano kudzivirira zvakanyanya sezvinobvira kushandiswa kweshuga uye nekuitsiva nezvimwe zvigadzirwa zvine hutano zvakadai seuchi kana stevia.
Anokurudzira zvakare kudzivirira kudya gorosi kana hupfu hwechibage sezvo husina zvinovaka muviri uye huri macalorie akawandisa yemuviri. Zvimwe zvigadzirwa zvinorambidzwa kwerudzi urwu rwekudya ndizvo hydrogenated mafuta sezvazvakaita nemargarini kana bota.
Iwo mapoka gumi ezvikafu zvePerricone chikafu
ari mapoka ezvokudya gumi inodzivirirwa nedyiti yePerricone zvinotevera:
ari Omega-3 mafuta acids Iwo anonyanya kubatsira kumuviri sezvo vachipa mafuta ane hutano kwairi. Ivo vanowanikwa mune zvekudya senge salmon, tuna, sardines, kana mazai.
Zvibereko izvo akapfuma faibha uye dzinobatsira kugutsa chishuwo sezvazviri nemaapuro nezvibereko zvemazambiringa.
Zvibereko zvakakora-mafuta kunge avocado. Aya mafuta ane hutano kumuviri uye anobatsira kudzora ropa cholesterol.
Zvinonhuwira zvakadai sesinamoni, nutmeg, kana turmeric. KwePerricone, zvinonhuwira zvakakosha mukudya sezvo zvichibatsira kuramba zviripo shuga mazinga muropa uye zvinotsiva kwazvo munyu.
Iyo chili ine simba guru rinopesana nekuzvimba uye inobatsira kuwedzera metabolism iyo inobvumidza iwe kubvisa macalorie nenzira inokurumidza.
Nzungu dzakadai semadnuts, maamondi kana mhodzi dzemanhanga. Ivo vakapfuma mukati ane hutano omega 3 mafuta uye iwo ane huwandu hwakawanda hweprotein.
Mbesa dzakadai bhinzi kana nyemba dzakapfuma mu fiber uye dzinobatsira kupisa mafuta nekukurumidza uye nemazvo kupfuura mamwe marudzi echikafu.
Yogati sezvazviri chikafu cheprobiotic Inobatsira kugadzirisa maruva emukati uye zvakare akapfuma mucalcium.
Zviyo kunge oats kana bhari ivo vane hutano chaihwo uye vane fiber yakawanda.
Muriwo wakadai se broccoli, sipinashi, kana lettuce. Zvikafu izvi iwo akadzika koriori uye akapfuma kwazvo muvhitamini uye faibha.
Perricone kudya kwemazuva ese menyu
Kudya kunopa zano kunwa 2 magirazi emvura paunongomuka, nekuti nzira iyi chepfu inogona kunge iri mumuviri inobviswa.
Chirafu: Inogona kunge iine imwe tortilla matatu akajeka pamwe nechidimbu chemuchero pamwe nekapu yeoatmeal nemukaka wakachekwa kana yogati. Haugone kuva nechingwa kana kofi kana muto.
Kudya: Unogona kuwana zvishoma salmoni yakakangwa pamwe nesaridhi yakasvibirira yakapfekedzwa nemafuta emuorivhi uye chimedu chemuchero. Zvakakosha kunwa magirazi maviri emvura iwe uchidya.
Snack: Munguva yekudya zvinokurudzirwa kutora yogati yakasikwa padyo nechimedu chemuchero negirazi remvura.
Kudya: Inotenderwa kudya imwe tuna yakakangwa pamwe chete nesaladi yakasvibirira yakapfekwa nemafuta emuorivhi uye chimedu chemuchero. Kumwa 2 magirazi emvura paunenge uchidya.
Inotenderwa kudya pakati-mangwanani chitsama nzungu kana chimwe chibereko kugutsa nzara uye kusasvika nenzara zvakanyanya panguva yekudya, nepo zvichikosha kunwa anenge marita maviri emvura pazuva kuitira kuti muviri ugare uine zvakakwana mvura.
Kukanganisa kwekudya kwePerricone
Kufanana chero chipi zvacho chinonzi chishamiso chikafu, inopa mhedzisiro munguva ipfupi inogoneka. Kunyanya, iyo Perricone yekudya inovimbisa kurasikirwa vashoma 8 kilos mumwedzi mumwe chete. Chokwadi ichi chinokonzeresa kuti kana zvikaitika kuti hapana shanduko mukudya, unopedzisira wawana huremu hwese hwakarasika nekuda kwekutya rebound mhedzisiro. Pasina kupokana ndiyo njodzi hombe yerudzi urwu rwekudya, saka zvakakosha kuti uchinje maitiro kana kudya kwapera uye kusarudza chikafu chine hutano uye chakaringana kukubatsira iwe kuti uchengetedze huremu hwakakodzera pamwe nekujairira kwekusimbisa muviri nenzira yakajairwa. .
Chimwe chikuru chinokanganisa ndechekuti ndizvo chikafu chisina kuenzana uye kuti haisi kupa zvese zvinovaka muviri kumuviri. Ndokusaka zviine njodzi kuwedzera kudya uku nekufamba kwenguva sezvo muviri ungatambura zvinetso zvakakomba zvehutano.
Kunyangwe paine zvipingaidzo nezvakaipa izvi, iyo yekudya kwePerricone ndeimwe yenzira dzakakurumbira dzekudzora uremu pasi uye pane zvakawanda vane mukurumbira avo vakatsigira rudzi urwu rwekudya. Pakati pavo, mudziviriri akasimba anga ari Mambokadzi weSpain uye ndizvo Mai Letizia Yakave yakashambadza yakanakisa yerudzi rwekudya.
Kana iwe wafunga kutanga urwu rudzi rwekudya kuti urasike mashoma mashoma ekuwedzera kilos, nyatsoteerera vhidhiyo inotevera sezvo zvichizokubatsira iwe kuziva zvishoma zvishoma nezve yakakurumbira kudya kwePerricone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Chikafu chePerricone
Iwo mabasiki ekudziisa-kumusoro, anoshanda kuraira
Kudya Matambiro Anorerutsa Zviratidzo Kune Vane Arthritis